जनआन्दोलनमा ४ छोरा गुमाएकी बेसहारा आमाको पिडा ! — Himali Sanchar
हेटौंडा, १५ जेठ : ओठ कलेंटी परेका छन् । अनुहार मुर्झाएको छ । हरपल रसाएका झैं देखिन्छन् आँखा । ‘बेपत्ताकी आमा’ भनेर चिनिने ७० वर्षीया सुभद्रामाया दर्नाल झुप्रे घरको छेउभित्तो समाउँदै साँघुरो कौसीमा निस्किइन् । होचो पिर्कामा बसेपछि आफ्नो ‘बेपत्ता’ परिचय सुनाउन थालिन् ।
हेटौंडा बजार नजिकै शान्तिनगरको सुकुम्बासी टोललाई ‘३७ घरे’ पनि भनिन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको उदयपछि बनेको यो सुकुम्बासी बस्तीमा ३७ घरपरिवार बसोबास गर्ने भएकाले टोलको नाम फेरिएको हो । ‘निको हुने घाउमा माक्रै खाटो बस्ने रहेछ बाबु,’ रत्तअल्पता र दमको बिमारले थलिएकी सुभद्रा बिस्तारै बोल्न थालिन्, ‘यो ३० वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै मेरा ४ जना छोरा बेपत्ता भएको कुरो खाटो नबस्ने घाउझैं बनेको छ ।
दमले सताएका बेला सुघ्ने औषधि (एयरटेक एसएफ), रगत बढाउने औषधि (हेमप्लस) देखि ‘हेपाटप’ (सलभर टनिक) तथा ‘गौ अर्क’, ‘अविपत्तिकर’, ‘काञ्चना र गुलगुल’, ‘चन्द्रप्रभा वटी’ आदि एक दर्जनभन्दा बढी एलियोप्याथी होमियोप्याथी औषधिमूलो नित्य खाइरहन्छिन् ।
काभ्रेकै फलामटारमा उनको ९ वर्षकै उमेरमा बिहा भएको थियो, २५ वर्षे नेत्रबहादुर दर्नालसँग । पहिलो सन्तान उनी १२ वर्ष उमेर छँदै जन्मियो, तर केही घण्टामात्रै बाँच्यो । फेरि १४ वर्ष पूरा नहुँदै अर्की छोरी जन्मिई । त्यो पनि उमेरमा २ वर्ष नलाग्दै बिती । ‘अनि त्यो ठाउँ फापेन भनेर मेरा बूढाले २०२२ सालमा हेटौंडाको हटिया बसाइँ ल्याएका हुन्,’ सुभद्राले सम्झिन्, ‘यता आएर सन्तान त अडिए तर दुःख र संघर्ष भने झनै बेहोर्नै नसकिने गरी थपिँदै गए ।
आफू बाँच्ने कि छोराछोरीलाई बचाउने भन्ने डरत्रासबीचमै तिनलाई हुर्काएकी थिएँ ।’ श्रीमान नेत्रबहादुर भने सुरुका वर्षहरूमा दर्जी पेसामा थिए । पछिल्ला वर्षमा उनी धामीझाँक्री पेसा र समाज सेवामा लागे ।
उनको पनि ८० वर्षको उमेरमा ७ वर्षअघि निधन भइसकेको छ । ‘आफू त भातभान्सा र घरधन्दामै सधैंभर डुबिरहें,’ सुभद्रा सम्झिन्छिन्, ‘छोराछोरीले ५ कक्षाभन्दा माथि पढ्न नसके पनि सिलाइबुनाइ पेसामा हात बसालिसकेका थिए, जेठो काजी र माइलो भक्तले त राम्रैगरी सीप सिकेका थिए । तर, केको देस्यानले छोयो छोयो, सबै जना आँखाबाट ओझेल पर्दै गए ।
‘२०४८ वैशाख २९ मा चुनाव भएलगत्तै जेठ ५ गतेका दिन दुवै जना दाजुभाइ (काजी र भक्त) ‘हामी बजार गएर आउँछौं’ भनेर निस्कनुभएको थियो, सामान्य फिते चप्पल र सर्ट(पाइन्टमा निस्कनुभएका उहाँहरू कहिल्यै घर फर्किनुभएन,’ माइलो भक्तबहादुरकी श्रीमती निर्मला दर्नालले सुनाइन्, ‘अनेक खोजबिन गर्‍यौं, अड्डाअदालत गयौं, कतै भेटिएनन् ।
सुभद्राको साइँलो छोरा भीमबहादुर भने हटिया गाउँबाट काठमाडौंमा रोजीरोटीका लागि छिरेका रहेछन् । ‘जग्गा किनबेचको काम गर्छु भन्थ्यो,’ सुभद्राले सुनाइन्, ‘यहाँ हटियामा १० कट्ठाजति हाम्रो जमिन थियो, त्यो बिक्री गरेर आएको पैसामध्ये अलिकति साइँलो छोराले लिएर गएको थियो । बाँकी रहेको पैसा श्रीमानले यताउता गरेरै सके । सुकुम्बासी बनेर १० वर्षअघि यो टोलमा बस्न आएकी हुँ ।
गणतन्त्रको पालो !
अनि कता हो, कति माउवादी हो कि पुलिस मरे अरे भन्ने म पनि सुनिरहन्थें । दुई छोरा २०४६ सालको आन्दोलनमा लागेर बित्थामा बेपत्ता भएको पीडापछि बाँकी छोराहरूको आशा बाँचेकै थियो, कान्छो र काइँलो पनि आन्दोलनमा लागे अरे भन्ने थाहा पाएर म खुबै रोएकी थिएँ । घरै बसेर गरिखाओ, माउवादीमा नलाग, जुलुसमा नहिँड भनेकी हुँ । पिटिक्कै टेरेनन्, आमाको बोली सुनेकै होइन ।
‘मेरा श्रीमान बेपत्ता भएका छोराहरू खोज्न भनेर अड्डा अदालत, मानव अधिकार सबैतिर गए । तर कहींकतै केही भएन,’ सुभद्राले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्ने हो, रगत बहे पनि जनताकै लागि बग्छ भन्थे । सबै कुरा सपनै भयो बाबु मलाई । मेरा दुःख, कष्ट, छोराछोरी, श्रीमान सबै सपनाजस्तै भए । मलाई विपना केही पनि भएन । विपनामा उही म आफू लुखुरलुखुर हिँड्छु, त्यत्ति हो ।
‘छोरा भए १० लाख मात्रै कमाउँदैनथे होलान् । पाल्थे पनि होलान्, पोल्थे पनि होलान् । म त बिहालमा छु नानी । भनौं कसलाई भन्ने, गरौं के गर्ने ? उमेर भए पनि त यसो मेलापात गरेर गरिखान्थें..,’ सुभद्रा गहमा भरिएर बोल्दै थिइन्, ‘म त कस्तो भाग्य लिएर आएकी रैछु ! ‘छोरा जम्मै खाइसक्या बूढी’ भन्नेहरू पनि यहीं छन् । अनेक दुःख, हन्डर काटेर हुर्काएकी थिएँ छोराहरू । छोरा सम्झना आए आकाशतिर फर्कनुपर्छ, धर्तीमा कोही छैनन् ।
कथा सकियो, ब्यथा बाँकी !
सुभद्राले जनआन्दोलन भनेर २ वटा छोरा (जेठो र माइलो) कुदिरहेका बेला ‘ठीकै छ नि त, अरू ३ छोराले बाटो समात्लान्’ भन्ने ठानेकी थिइन् । मेरो इच्छा, सपनाका कुरा कहिल्यै कसैले सोचेन । न छोराले केही सोधे, न श्रीमानले नै कहिल्यै ‘तँलाई के मन पर्छ ?’ भनेर सोधे,’ दमले चेपेको स्वरमा रोकिँदै उनले भन्दै थिइन्, ‘यो मन घट्टमा पानी लगाएपछि घुमेको फोहोरा जस्तै हुन्छ बाबु । उमेर र समयका आधारमा यो मेरो घट्ट घुमाई कम होला कि भन्ठान्छु । अझै जोडजोडले घुमिरहेको छ । यो एक मुठ्ठी सास रहिन्जेल घुमिरहन्छ होला ।’
बेपत्ता बनेका आफ्ना ४ जनै छोरालाई आमा सुभद्रा सपनामा देखिरहन्छिन् । नजिकै कुख्रेनी खोलामा साइँला छोरा र आफ्ना श्रीमानको आफैंले काजक्रिया गरेकाले होला, तिनीहरूले भने सपनामा त्यति सताउँदैनन् ।
सपनामा म आफूलाई टाढाटाढा उडिरहेको देख्छु, बेपत्ता भएका छोराहरूको अनुहार झल्को आएर तिनलाई पछ्याउन खोजेजस्तो देख्छु,’ पढेरभन्दा परेर जीवन–जगत् बुझेकी सुभद्रा भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीं त कस्तो लाग्छ भने यो हामी आमाको जात भनेको छोराछोरी, लोग्ने सबैका लागि खेलौनाजस्तै मात्रै हो ।
आउँछन्, खेल्छन् अनि जान्छन् । दुई दिनका लागि आए, खेल खेले, गए । यसरी विपत् पर्ने बेला एउटैलाई मात्रै पर्दोरहेछ कि ? काखमा ५/५ भाइ छोरा थिए, सबै आज बिलाए । सम्झँदा छाती चिरिन्छ, रोएरै आँसु पनि अब त सुकिसक्यो ।
‘सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग अथवा द्वन्द्व निरूपणका नाममा जेजति समिति बने पनि व्यवहारमा उपलब्धि निराशाजनक छ,’ विगतमा शान्ति समितिमा रहेका स्थानीय तेजबहादुर चौंलागाईं भन्छन्, ‘पीडित परिवारका लागि राज्यले के गर्न सक्यो त ? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षाको अवसर कहाँ दिइएको छ त ?
सुझद्राकै घरमा संक्रमणकालीन न्यायका हकअधिकारदेखि दलित मुत्तिबारेका पर्चासम्म राखिएको भेटियो । तर, त्यसको अर्थ र उपयोगबारे असाक्षर सुभद्रा पुरै बेखबर थिइन् । ‘नेतागणका मीठा र चिप्ला कुरामा सबैभन्दा छिटो भर पर्ने वर्ग पनि यही हो,’ मानव अधिकार तथा जातीय भेदभाव सरोकार केन्द्र, नेपालसम्बद्ध कमलले सुनाए, ‘हुँदाखाँदाको जायजेथा–जमिन र सन्तानले भरिएको एउटा दलित परिवारलाई कसरी सबै अर्थमा राज्य र राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हेर्न सुभद्रा आमाको जीवनलाई हेरे पुग्छ। (कान्तिपुरबाट)